Luk 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
19 O wee banye Jeriko+ ma na-agafere. 2 N’ebe a, e nwere otu nwoke a na-akpọ Zakịọs; ọ bụ onyeisi ndị ọnaụtụ. Ọ bakwara ọgaranya. 3 Otú ọ dị, ọ nọ na-achọ ịhụ+ onye Jizọs a bụ, ma o nweghị ike n’ihi ìgwè mmadụ, n’ihi na ọ dị obere. 4 Ya mere, ọ gbaara gaa n’ihu ihu ma rịgoro n’osisi fig ọhịa ka o wee hụ ya, n’ihi na ọ ga-esi n’ụzọ ahụ gafere. 5 Mgbe Jizọs rutere ebe ahụ, o leliri anya elu, sị ya: “Zakịọs, mee ọsọ ọsọ rịdata, n’ihi na aghaghị m ịnọ n’ụlọ gị taa. 6 O wee mee ọsọ ọsọ rịdata ma jiri ọṅụ nabata ya dị ka ọbịa. 7 Ma mgbe ha hụrụ ya, ha niile malitere ịtamu,+ sị: “Nwoke bụ́ onye mmehie ka ọ gara nọrọ n’ụlọ ya.” 8 Ma Zakịọs biliri ọtọ wee gwa Onyenwe anyị, sị: “Lee! Onyenwe anyị, ọkara nke ihe m nwere ka m ga-enye ndị ogbenye, ihe ọ bụla m pụnaara onye ọ bụla site n’ebubo ụgha,+ m ga-enyeghachi ya okpukpu anọ.”+ 9 Mgbe o kwuru nke a, Jizọs sịrị ya: “Nzọpụta abịawo n’ụlọ a taa, n’ihi na ya onwe ya bụ nwa Ebreham.+ 10 N’ihi na Nwa nke mmadụ bịara ịchọ na ịzọpụta ihe furu efu.”+ 11 Ka ha nọ na-ege ntị n’ihe ndị a, o nyere otu ihe atụ ọzọ, n’ihi na ọ nọ Jeruselem nso, ha nọkwa na-eche na alaeze Chineke na-aga ịpụta ìhè ozugbo.+ 12 Ya mere, ọ sịrị: “Otu nwoke nke si n’ezinụlọ eze jere n’ala dị anya ka ọ gaa nweta ike ọchịchị ma lọta.+ 13 Ọ kpọrọ ndị ohu ya iri, nye ha maịna iri, sị ha, ‘Zụwanụ ahịa ruo mgbe m ga-alọta.’+ 14 Ma ụmụ amaala ibe ya kpọrọ ya asị.+ Ha wee zipụ ìgwè ndị nnọchiteanya sochie ya azụ, sị, ‘Anyị achọghị ka nwoke a bụrụ eze anyị.’+ 15 “E mesịa, mgbe o nwetara ike ọchịchị wee lọta, o nyere iwu ka a kpọọrọ ya ndị ohu ahụ o nyere ego ọlaọcha ahụ, ka o wee mata ihe ha ritere n’uru n’azụmahịa.+ 16 Onye mbụ wee bịa, sị ya, ‘Onyenwe m, maịna gị ritere maịna iri n’uru.’+ 17 Ya mere, ọ sịrị ya, ‘I mere nke ọma, ezi ohu! Chịwa obodo iri, n’ihi na i gosiwo na i kwesịrị ntụkwasị obi n’ihe dị nnọọ nta.’+ 18 Onye nke abụọ wee bịa, sị ya, ‘Onyenwe m, maịna gị nwetara maịna ise.’+ 19 Ọ gwakwara onye nke a, sị, ‘Gị onwe gị, bụrụ onyeisi obodo ise.’+ 20 Ma onye ọzọ bịara, sị, ‘Onyenwe m, lee maịna gị, nke m kechiri n’ákwà debe. 21 Lee, egwu gị ji m, n’ihi na ị bụ nwoke aka ike; ị na-ewere ihe ị na-edebeghị, ị na-aghọrọkwa mkpụrụ ị na-akụghị.’+ 22 O wee sị ya, ‘Eji m okwu ọnụ gị+ na-ekpe gị ikpe, ajọ ohu. Ị̀ na-ekwu na ị maara na m bụ nwoke aka ike, onye na-ewere ihe ọ na-edebeghị ma na-aghọrọ mkpụrụ ọ na-akụghị?+ 23 Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere na i tinyeghị ego ọlaọcha m n’ụlọ akụ̀? Mgbe m lọtara, m gaara anara ya na ọmụrụ nwa ya.’+ 24 “O wee gwa ndị guzo n’akụkụ, sị, ‘Naranụ ya maịna ahụ ma nye ya onye ahụ nke nwere maịna iri.’+ 25 Ma ha sịrị ya, ‘Onyenwe anyị, o nwere maịna iri!’— 26 ‘Ana m asị unu, Onye ọ bụla nke nwere ka a ga-enyekwu; ma onye nke na-enweghị, a ga-anapụ ya ọbụna ihe o nwere.+ 27 Ndị iro m ndị a bụ́ ndị na-achọghị ka m bụrụ eze ha, kpọtanụ ha ebe a gbuo ha n’ihu m.’”+ 28 Ya mere, mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ọ gawara, gbagowe Jeruselem.+ 29 Mgbe ọ garuru Betfeji na Betani nso n’ugwu a na-akpọ Ugwu Oliv,+ o zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya,+ 30 sị ha: “Gaanụ n’obodo nta ahụ unu na-ahụ, mgbe unu banyere n’ime ya, unu ga-ahụ nwa ịnyịnya ibu e liwere eliwe, nke mmadụ ọ bụla na-anọkwasịtụbeghị. Tọpụnụ ya, kpụtakwanụ ya.+ 31 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụọ unu, sị, ‘Gịnị mere unu ji na-atọpụ ya?’ Sịnụ ya, ‘Ọ dị Onyenwe anyị mkpa.’”+ 32 Ya mere, ndị ahụ e zipụrụ gara wee hụ ya dị nnọọ ka ọ gwara ha.+ 33 Ma ka ha nọ na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ, ndị nwe ya sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ?”+ 34 Ha wee sị: “Ọ dị Onyenwe anyị mkpa.”+ 35 Ha wee kpụgara ya Jizọs, ha wụkwasịkwara uwe elu ha n’elu nwa ịnyịnya ibu ahụ ma mee ka Jizọs nọkwasị na ya.+ 36 Ka ọ na-aga,+ ha nọgidere na-agbasa uwe elu ha n’okporo ụzọ.+ 37 Ozugbo o rutere nso n’okporo ụzọ gbadara n’Ugwu Oliv, ìgwè mmadụ ahụ dum bụ́ ndị na-eso ụzọ ya malitere iji oké olu na-aṅụrị ọṅụ ma na-enye Chineke otuto banyere ọrụ niile dị ike ha hụrụ,+ 38 sị: “Onye a gọzịrị agọzi ka Onye ahụ nke na-abịa dị ka Eze n’aha Jehova bụ!+ Ka udo dịrị n’eluigwe, ka otuto dịrịkwa n’ebe kasị elu!”+ 39 Otú ọ dị, ụfọdụ n’ime ndị Farisii bụ́ ndị si n’ìgwè mmadụ ahụ sịrị ya: “Onye Ozizi, baara ndị na-eso ụzọ gị mba.”+ 40 Ma ọ zara, sị: “Ana m asị unu, Ọ bụrụ na ndị a agbachi nkịtị, nkume+ ga-eti mkpu.” 41 Mgbe o rutekwara nso, ọ hụrụ obodo ahụ ma kwaara ya ákwá,+ 42 sị: “A sị na gị onwe gị ghọtara+ n’ụbọchị taa ihe ndị ga-eweta udo—ma ugbu a, e zowo ha ka anya gị ghara ịhụ ha.+ 43 N’ihi na ụbọchị ga-abịakwasị gị mgbe ndị iro gị ga-eji osisi pịrị ọnụ+ wuo ogige+ gburugburu gị, ha ga-agbakwa gị gburugburu+ ma si n’akụkụ niile na-enye gị nsogbu.+ 44 Ha ga-akụtu gị na ụmụ gị bụ́ ndị nọ n’ime gị n’ala,+ ha agaghịkwa ahapụ otu nkume n’elu nkume ibe ya+ n’ime gị, n’ihi na ị ghọtaghị oge e ji eleta gị.”+ 45 O wee banye n’ime ụlọ nsọ ma malite ịchụpụ ndị na-ere ihe,+ 46 sị ha: “E dere, sị, ‘Ụlọ m ga-abụkwa ụlọ ekpere,’+ ma unu mere ya ọgba nke ndị na-apụnara mmadụ ihe.”+ 47 Ọ malitekwara izi ihe kwa ụbọchị n’ụlọ nsọ. Ma ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na ndị isi n’etiti ndị Juu nọ na-achọ igbu ya;+ 48 ma ha achọtaghị ihe ha ga-eme ya, n’ihi na ìgwè mmadụ ahụ niile nọgidere na-esogharị ya ka ha nụrụ okwu ya.+